Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta Soo-jeedinayaa. - PDF
Download "Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta Soo-jeedinayaa."
1 Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay Carruurta Soo-jeedinayaa Sarakiciiddii Waxa qoray: Edward Hughes Waxa Tusaaleeyay: Janie Forest Qisada 54 ee 60 Waxa tarjumay: Zemendale Translation Service Waxa dhaqan-geliyay: Lyn Doerksen Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada Liisan: Waxaad xaq u leedahay inaad koobiyayso ama daabacato qisadan, in alla inta aanad ka iibinaynin. Somali Gabadh ayaa taagnayd meel taag ah dusheed, indheheeda murugadu ka muuqataana waxa ay daawanayeen muuqaal aad u xun. Waxa dhimanayay wiilkeedii. Hooyadani waxa ay ahayd Maryan, waxaanay taagneyd meel u dhow halkii Ciise loogu qodbayay iskutallaabta korkeeda. Sidee waxyaalahan oo dhammi u dhaceen? Sidee Ciise noloshiisaas quruxda badnaydi uugu dhammaan kartaa sidan foosha xun? Sidee Ilaah wiilkiisa uugu ogolaan karaa in iskutallaabta korkeeda lagu qodbo oo halkaas uugu dhinto? Ciise ma waxa uu qalad ku sameeyay cidda uu ahaa? Ilaah miyuu guul-darraystay? 1 2
2 Maya! Ilaah muu guul-darraysan. Ciise muu samaynin wax qalad ah. Ciise marwalba wuxuu ogaa in isaga ay dili doonaan dad xumaan falayaal ahi. Xitaa markii Ciise uu ahaa inan yar, ni da weyn oo la yidhaahdo Simecon ayaa Maryan u sheegay murugadaas iman doonta. Maalmo yar ka hor intii Ciise aan la dilin, waxa timid haweenay oo cagihiisa ku shubtay cadar iyo udug. Xertii dabeeto waxay yidhaahdeen, Naagtani way is khasaarinaysaa, oo iyada way canaananayeen. Ciise markaa wuxuu yidhi, Naagtani waxa ay samaysay shaqo wanaagsan, waxay sidan u samaysay aasitaankayga. Waa ereyo cajiib leh! 3 4 Intaas dabadeed, Yuudas oo ka mid ahaa labo iyo tobankii xerta Ciise ahaa, waxa uu waafaqay inuu Ciise wadaadka sare uugu gacan geliyo qadaadiic 30 ah aawadood. 5 Xilligii Iidda Kormarista, Ciise waxa uu xertiisa la wadaagay cuntadii ugu danbaysay. Wuxuu iyaga u sheegay waxyaalo cajiib leh oo ku saabsan Ilaah iyo ballanqaadyadiisa uu siiyay kuwa isaga jecel. Dabeeto, Ciise wuxuu iyaga siiyay kibis iyo koob ay wadaagaan. Tani waxa ay ahayd inay iyaga xasuusiso in Ciise jidhkiisa iyo dhiiggiisa loo bixiyay cafiska denbiyada awgood. 6 Ciise dabadeedna wuxuu xertiisa u sheegay in isaga la gacan gelin doono, oo iyaguna ay baxsan doonaan. Butros wuxuu ku adkaystay oo yidhi, Anigu ma baxsan doono. Ciise wuxuu isaga ku yidhi, Inta aan diiggu ciyin ka hor, waxaad I inkiri doontaa saddex jeer. Wakhti danbe oo habeenkaas ah, Ciise wuxuu tegay Beertii Getsamane. Xertiisii isaga la socotayna way hurdeen. Ciise wuxuu ku ducaystay, Aabbow, koobkan iga fogee, hase ahaatee, doonistaydu yaanay noqon, taaduse ha noqoto. 7 8
3 Si kedis ah waxa beertii kusoo galay col uu horkacayo Yuudas. Ciise ismuu difaacin, laakiin Butros ayaa nin dhegta ka jaray. Ciise dabeeto aayar ayuu taabtay ninka dhegtiisii oo wuu bogsiiyay isaga. Ciise waxa uu ogsoonaa xidhitaankiisu inuu yahay qayb ka mida doonista Ilaah. Dadkii badnaa waxa ay Ciise u kexeeyeen gurigii wadaadka ugu sarreeya. Halkaasna culimadii diinta Yuhuuddu waxa ay ku sheegeen inay waajib tahay inuu Ciise dhinto. Butros waxa uu markaas ka daawanayay meel u dhow dabka addoomada. Halkaasna saddex jeer ayaa dadku ay ku arkeen Butros oo ay ku yidhaahdeen, Waxa aad la socotay Ciise! Butrosna saddex jeer ayuu arrintaas inkiray, waxayna noqotay sidii Ciise hore u sii sheegay. Butros xitaa wuu habaartamay oo wuu dhaartay Waxyar dabadeed, waxa ciyay diiggii. Taasi waxa ay Butros uuga dhignayd sida codkii Ilaah oo isaga xasuusinaya erayadii Ciise. Butros dabeetana si aada ayuu u ooyay Yuudas sidoo kale wuu ka xumaaday arrintaas. Wuxuu ogsoonaa in Ciise aanu denbiile ahayn. Yuudas wuxuu 30 qadaadiicda ahaa dib uugu celiyay wadaaddadii, laakiinse waa ay ka diideen inay qaataan. Yuudas wuxuu daadiyay lacagtii, dabeeto wuu baxay oo wuu is dilay
4 Wadaaddadii waxay Ciise hor keeneen Bilaatos, oo ahaa taliyihii Roomaanka. Bilaatos wuxuu yidhi, Ninkan wax denbi ah kumaan helin. Laakiin dadkii badnaa waxa ay ku qayliyeen, Ugu danbayntii Bilaatos wuu aqbalay, waxaanu xukumay in Ciise ku dhinto iskutallaabta korkeeda. Askartii waa ay dharbaaxeen Ciise, oo wejigay ka candhuufeeyeen, waxaanay la dhaceen jeedal. Waxa ay sameeyeen taash qodxaan laga sameeyay oo madaxa u geliyeen kuna cadaadiyeen madaxiisa. Dabeetana waxa ay ku musbaareen iskutallaab ka samaysan loox si uu ugu dhinto halkaas. Iskutallaabta ku qodob! Iskutallaabta ku qodob! Ciise marwalba wuxuu ogsoonaa inuu sidaas u dhiman doono. Sidoo kale wuxuu ogsoonaa in dhimashadiisu ay cafis u keeni doonto denbiilayaasha isaga isku halleeya. Waxa hareeraha ka xigay oo lala qodbay denbiilayaal. Midkood waxa uu rumaystay Ciise, waxaanu tegay jannada. Kii kale se laakiin muu rumaysanin. Saacado markuu silcayay kadib, Ciise wuxuu yidhi, Waa dhammaatay, waanu dhintay. Shaqadiisii waa la dhammaystiray. Waxaana isaga lagu aasay xabaal gaar ah Askarkii Roomaanku intaas dabeed waxa ay shaabbadeeyeen dhagaxii oo xabaashiina ilaalo ayay u direen. Imika cidina ma gali karto cidina kama bixi karto. Haddii tani ay ahaan lahayd dhammaadka sheekada, murugo intee le eg ayay yeelan lahayd. Laakiinse Ilaah waxa uu sameeyay wax cajiib leh. Ciise dhimashada kumuu sii jirin! 19 20
5 Salaaddii hore ee subaxnimadii maalinta ugu horreysay toddobaadka, kuwo ka mida xertii Ciise ayaa arkay iyadoo xabaasha laga qaaday dhagaxii ku daboolnaa. Markii ay gudaha xabaasha eegeenna, Ciise maydkiisu muu oollin meesha Haweenay ayaa sii joogtay iyadoo xabaasha ka dul ooyaysa. Ciise ayaa dabeetana iyada u muuqday! Waxa ay dib uugu carartay xertii kale si ay uugu sheegto warka farxadda leh. CIISE UU NOOLYAHAY! CIISE WUU KA SARAKACAY DHIMASHADA! Sarakiciiddii Qiso ka ahaatay Ereyga Ilaah, Kitaabka Quduuska ah, waxa laga helayaa Matayos 26-28, Luukos 22-24, Yooxanaa Erayadaada furniinkoodu wax buu iftiimiyaa. Sabuurka 119:130 Si dhakhso ah Ciise wuxuu uugu yimid xertii, waxaanu tusay nabarradii gacmihiisa musmaarrada lagaga qodbay. Waxa ay ahayd run. CIISE WAA UU SOO NOOLAADAY! Wuxuu Butros ka cafiyay inkiritaankiisii uu isaga ku dafiray, waxaanu xertiisa u sheegay inay qofkasta u sheegaan waxyaalaha isaga ku saabsan. Dabeetana wuxuu dib uugu laabtay samada oo ahayd meeshii uu hore uuga yimid Iiddii Masiixiga ee uugu horreysay Ilaah wuxuu ogsoonyahay inaan samaynay waxyaalo xunxun, kuwaas oo uu ku magacaabo denbi. Ciqaabka denbiguna waxa weeyi dhimasho. Ilaah si aada ayuu inoo jecelyahay waxaanu soo diray Wiilkiisa, Ciise, si uu ugu dhinto Iskutallaab korkeeda una bixiyo qaanta denbiyadeenna. Haddaad rabo inaad kasoo laabato xad-gudubyadaada, sidan ku dhex Ilaah: Ilaahaygii weynaayow, waxaan rumaysanahay inuu Ciise u dhintay aniga aawaday isagoo haddana nool. Fadlan ii kaalay oo iga cafi denbiyadayda, si aan imika u helo nolol cusub, oo aan adiga weligaa kuula jiro. Igu caawi inaan adiga awgaa u noolaado anoo ka dhigan ilmahaaga. Aamiin. Yooxanaa 3:16 Akhri Kitaabka Quduuska ah oo maalin walba Ilaah la hadal!
Accessible Responsive Quality Caring Ethical Commitment Ethical Quality Caring Accessible Commitment Responsive Responsive Caring Ethical Accessible Quality Commitment Commitment Accessible Caring Ethical
COMPREHENSIVE PLAN UPDATE 2035 Comprehensive Plan Recommended Draft What s Inside? Vision and Guiding Principles How to Use the Plan Goals and Policies List of Significant Projects Comprehensive Plan Map
Small Business Report Life Change Events Form
Small Business Report Life Change Events Form FORMELG00506 ELG-005-06 V0.5 Employers or their authorized representative will need to fill out this form and include a signed Colorado Uniform Employee Application
Supporting children at home with reading and writing K AY E L O W E P h D A D J U N C T A S S O C I AT E P R O F E S S O R U N I V E R S I T Y O F C A N B E R R A Olny srmat poelpe can raed tihs.?i cdnuolt